FIFIDIANANA : SAIKA NIHARAN’NY FITSARAMBAHOAKA IREO MPANAO FAKAN-KEVITRA TANY TOAMASINALa dépêche de Madagascar
La dépêche de MadagascarFiainam-pirenena MALAGASY PEJY MALAGASYFIFIDIANANA : SAIKA NIHARAN’NY FITSARAMBAHOAKA IREO MPANAO FAKAN-KEVITRA TANY TOAMASINA
FIFIDIANANA : SAIKA NIHARAN’NY FITSARAMBAHOAKA IREO MPANAO FAKAN-KEVITRA TANY TOAMASINA
Tampoka nefa tsy mahazatra. Henika ireo tanora manao andiany maka ny hevitr’ireo olom-pirenena avy nandatsa-bato ireo biraom-pifidianana teto an-drenivohitra sy tamin’ireo distrika any amin’ny faritra, omaly. Tsy nahafaly ireo mpifidy anefa ny fahitana azy ireo ka niteraka savorovoro izany, toy ny tany Ankirihiry, an-tampon-tanànan’i Toamasina.
“Vehivavy efatra izao no saika niharan’ny fitsaram-bahoaka tao amin’ny EPP Todivelona, izay biraom-pifidianana nokasain’izy ireo hamantarana ny safidin’ireo mpandatsa-bato”, raha ny fampitam-baovao voaray avy amin’ny mpitandro ny filaminana tany Toamasina.
Nitaraina ireo mpifidy fa voatohintohina ny fitazonan’izy ireo samirery ny safidiny. Voalaza mantsy fa miezaka mamantatra izay kandida nosafidian’ny olona tsirairay ireo andiana tanora manao io fakan-kevitra io. Raikitra vokatr’izany ny fitangoronana nanoloana ny EPP Todivelo, ka maro ireo niakatrafo sy saika nikasi-tànana ireo tanora nametra-panontaniana ireo.
Tsy tany Toamasina irery ihany anefa no nisehoan’io tsy fahafaliana momba ny famotopotorana ny safidin’ireo mpifidy io, fa nanomboka tany amin’ny distrikan’Andramasina izany ka hatrany Betroka ary nipaka hatrany Farafangana. Avy hatrany moa dia nandray fepetra tamin’ny fandroahana ireo andian’olona ireo ny tomponandraikitra teny anivon’ny biraom-pifidianana ka voasoroka ny fisavorovoroana. Nanamarika moa ny avy eo anivon’ny Vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana (CENI) fa tsy azo atao izany fakan-kevitra izany ho fanajana ny safidin’ny tsirairay.
Partager la publication "FIFIDIANANA : SAIKA NIHARAN’NY FITSARAMBAHOAKA IREO MPANAO FAKAN-KEVITRA TANY TOAMASINA"
Shannon 14/01/2019 at 18:21 Repondre